Nke a bụ nke e mere ka a mara site n'ọnụ ode akwụkwọ mgbasa ozi ndị otu a, bụ maazị Emma Powerful site n'ozi ọ kụpụrụ ụbọchị ụka. Ọ kọwara nzukọ ahụ dịka nke a ga-anọ na ya wee na-etegha asịrị gbasaara ikezigharị ọnọdụ ala anyị, bụ akụkọ a kọbara kemgbe ụwa, ma kpọkuzie ndị otu IPOB niile ka ha were abalị wakpo ebe ahụ a na-akwado ịnọ wee me nzukọ ahụ n'abalị iri abụọ nke ọnwa Mee iji wee kposaa ya bụ nzukọ.
O kwuru na ndị na-achịkọba ọgbakọ ahụ, bụ Ọhaneze Ndigbo chọrọ iji ohere ahụ wee gbutọpụ ala Biafra ma ọ bụ rekwa ha n'elu wee ruo otu narị ahọ ọzọ site na njikọ aka ha na ndị na-egwu okwe ndọrọ ndọrọ na mkparịta ụbụbọ ikezigharị ọnọdụ ala anyị, ma sị na nke ahụ agaghị emezị ọzọ maka na otu osisi adịghị aghụ mmadụ n'anya ugboro abụọ.
O mere ka a mara na ha adọbụọla Ọhaneze Ndigbo aka na ntị ka ha ghara ịchịkọba ọgbakọ ndị o ji akpa elì ozu ahụ n'ala Igbo, bụ nzukọ enweghị isi na ọdụ ma ọ bụ ihe ọbụla ọ pụrụ iwetà maka ọdịmma ndị Igbo, mana ha añaghị ha ntị; we sịzie na n'ihi nke a, na ndị otu IPOB ga-ejupụta ebe ahụ a chọrọ ịnọ me ya bụ ọgbakọ, bụ ama egwuregwu Alex Ekwueme dị n'Awka, ma jupụtakwa na mpaghara Awka niile iji hụ na e meghịdị ọgbakọ ahụ eme chaa chaa ma ya fọdụzie imepụta ihe ọbụla na ya.
Na nchịkọta, maazị Powerful kọwara na ndị ndú ndị Igbo na fọnfọju akpa jupụtara n'ime ha so na nsogbu kacha nsogbu ụmụafọ Biafra na-agabiga ugbu a na ọnọdụ ha nọ n'ime ya n'ala anyị. Ọ sị na ndị isi ahụ nwere ike ga chịkọba ọgbakọ ahụ na nmpaghara ọzọ ma ọ bụ na steeti ọzọ n'ala Nigeria, na-abụghị ala Igbo, ma ṅụọ iyi sị na ebe ha jụrụ ịṅa ntị, na ha ga-amazị isi na-ebu ogìdì ụbọchị ahụ, na-agbanyeghị ụdị ndị ọrụ nchekwa ọ sọrọ ha kpọta ebe ahụ ụbọchị ahụ, maka na e jighị nkume elele isi kara aka.